विचार / बहस - सरकारले ‘क्लीन फिड’ लागू गरे अर्बौंको लगानी डुब्ने
काठमाडौं । टेलिभिजन सेवा प्रदायक संघ–संस्थाहरुले सरकारले ‘क्लीन फिड’ लागू गरेमा सन्चारमाध्यमहरु धराशायी हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरुले त्यसो भएमा अर्बौंको लगानीसमेत डुब्ने बताए । कार्यक्रममा डिस होमका प्रवन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले क्लिन फिड विश्वभरि छ भनेर हावा फैलाईएको बताए । आचार्यले आफूहरु क्लिन फिडको विरोधी नभएको जिकिर गरे। कार्यक्रममा नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुदीप पराजुलीले सरकार घरघरमा सन्देशमूलक टेलिभिजनको ‘सिग्लन’ पुर्‍याउने दायित्वबाट पन्छिन थालेको आरोप लगाए ।	थप पढ्नुहोस्
नेपालमा विदेशी च्यानलहरु २४ घन्टाका लागि बन्द, विज्ञापन ऐन लागू भएमा व्यवसाय नै धरापमा !
काठमाडौं । प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ प्रति असहमति जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले विज्ञापन प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरु २४ घन्टाका लागि बन्द गरेका छन् । सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि विज्ञापन प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरिएको हो । सोमबार काठमाडौंमा इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेशी च्यानलहरु बन्द गराएको जानकारी दिएका हुन् । विज्ञापन नभएका विदेशी च्यानलको भने प्रसारण नरोकिएको महासंघले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
जतिसुकै उच्च ओहोदामा बसी काम गरेको भए पनि अवकाश लिएपछिको जीवनमा एउटा निजामती कर्मचारी कुण्ठित र उपेक्षित जीवन बाँच्न विवश हुने रहेछ भन्ने मर्म व्यक्त गर्दै लोकसेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुमले एउटा लेखै लेखेको यहाँ सम्झिन मन लाग्छ । किन त ? यसको धरातलीय यथार्थको उत्तर सबै निजामति कर्मचारीले पाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको विधिवत छनौट गर्ने लोकसेवाका सदस्यहरूले यस विषयमा के धारणा बनाएका छन्, प्रश्न अनुत्तरित छ ।	थप पढ्नुहोस्
बीपी आफ्ना छोरा–भतिजालाई हेरेर ओठ लेप्य्राउँदै भन्नुहुन्थ्यो— ‘यी फाइभ स्टार भए, यिनीहरूले केही गरेर देखाउलान् भन्ने आशा भएन’ भ्रष्टाचार र राज्यब्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परस्परका पुरक भएर एकैसाथ चलिरहेका छन् । यसै कारणले बेलाबखतमा सत्तामुखी राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेका छन् । जनता दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य चाहन्छन्, तर उनीहरू पनि प्रायः आफैँभित्रको भ्रष्टाचाररुपी चोरलाई बचाएर भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । हालै सरकारले फिर्ता लिएको विवादास्पद ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ मा १०४ दफा र अन्य धेरै उपदफा भएको मध्ये एकदर्जन भन्दाबढी विषय वा मामिलाहरूमा विवाद र प्रस्तुतकर्ता पक्षको खराब नियत देखापरेको छ । विधेयकले हिन्दू,बौद्ध तथा ओमकार परिवारभित्रका धर्मावलम्बीका गुठीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने इसाई वा अन्य धर्मका गुठीबारे एक शब्द उल्लेख छैन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । फेसबुकले अर्को वर्ष लिब्रा नाम दिइएको एउटा नयाँ डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सोसल मिडिया कम्पनीका अनुसार त्यस्तो मुद्रामार्फत् मानिसहरूले उसको आफ्नै एप्स तथा ह्वाट्सएपबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्नेछन्। भविष्यमा उबर र भिसाजस्ता कम्पनीले समेत त्यसलाई स्विकार गर्न सक्ने फेसबुकले बताएको छ। फेसबुकका अनुसार इन्टरनेटको पहुँचमा भएका र स्मार्टफोन बोक्ने सबैले लिब्रा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। मानिसहरूले पैसाको बचत, लेनदेन र खर्च मोबाइलमा मेसेज पठाए जसरी नै सहज तरिकाले गर्न सकुन् भन्ने आफूहरूले चाहेको फेसबुकले बताएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
गुठी विधेयकले सरकारको बचेखुचेको जनसमर्थनलाई पिँधमा पु¥याईदियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईतिहाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेकै हो । नेपाली राजनीतिको इतिहासमै दुर्लभ मानिएको यस्तो अवसर २०१५ सालमा जननायक बीपी कोईरालालाई उपलब्ध थियो भने २०७४ को निर्वाचनले केपी ओलीलाई दिलायो । त्यो विशाल समर्थनलाई आफ्नो वास्तविक शक्तिको स्रोतका रुपमा अपनाएर सबैलाई समेटी अघि बढ्न सकेको भए सफलता उनको हातकै दूरीमा थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रू. २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देख्दा ओली त्यस्तै जोकर बन्न पुगे ।	थप पढ्नुहोस्
हिन्दीमा एउटा कहावत छ –" जब गिदड की मौत आती हैं तो ओ शहर की तरफ भाग दौड्ती हैं ।" यसैसँग मिल्दो नेपाली उखान पनि छ –" पुतलीलाई काल आयो भने टुकीतिर जान्छ ।" त्यस्तै हालत भएको छ अहिले दुईतिहाई समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । सत्ता उन्माद चढेको बेला उनी सर्वसत्तावाद लाद्न लालयित छन् । यसै सिलसिलामा उनले भर्खरै गुठी सम्वन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराए । तर परिवेश उल्टो भईदियो । उनले कल्पना नै नगरेको विरोध आईलाग्यो । सर्वसत्तावाद र अधिनायवाद लाद्न उनी अग्रसर भएको बुझाई आम जनमानसको रह्यो । त्यसले उनको बालुवाटारको जग नै हल्लाई दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
गुठीमा कम्युनिस्ट पार्टी नै छिर्न खोजेपछि….!
काठमाडौं उपत्यकाका बहुसंख्यक मतदाताले जुन पार्टी (सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) लाई भोट दिएका थिए, त्यही पार्टीको सरकारबिरुद्ध स्थानीय भुईतहका मतदाता समुदाय हाल क्रुद्ध हुँदै सडकमा ओर्लेका छन् । समाजमा खैलाबैला पैदा हुनुपर्ने बिऊकारण सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको ‘गुठी विधेयक’हो । यसका सरोकारवालाहरू खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने समुदायलाई त उक्त विधेयकले ‘जीवन–मरणको चुनौतीको घडी’ कै रुपमा ल्याएर उद्वेलित बनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री ज्यू ! ‘जनताको ढाड भाँच्ने गरि चर्को कर असुलेर समृद्धि आउदैन’
काठमाडौं । देशहरु कसरी समृद्ध हुन्छन् र कसरी कंगाल हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री पाउल कोलियरको भनाइ अनुसार देश कंगाल हुनका लागि तीनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै कारण पर्याप्त हुन्छन्, जुन निम्न रहेका छन् । १. समुद्रसम्म पुग्ने आफ्नो बाटो नहुनु र खराब छिमेकी हुनु २. प्राकृतिक श्रोत र साधन हुनु तर प्रयोग गर्न नसक्नु ३. देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनु, कुशासन हुनु र आन्तरिक द्धन्द्धमा फस्दै जानु नेपालमा यी तिनै वटै कारणहरु जबर्रजस्त उपस्थित छन् ।	थप पढ्नुहोस्